Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed laftaagreen oo bisha ramadaan ka digay Qaraxyada iyo dilalka shabaab.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed laftaagreen oo bisha ramadaan ka digay...
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed laftaagreen oo bisha ramadaan ka digay Qaraxyada iyo dilalka shabaab..
Xili saakay ay bilaabatay Bisha Barakeysan ee Ramadaan ayaa Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed ( laftaagreen) waxaa uu ka hadlay xaaladaha amniga iyo cudurka safmareenka ah ee COVID-19.
Madaxweynaha ayaa marka hore Shacbaka degaannada Koonfur Galbeed ugu hambalyeeyay Curashada Bisha Barakeeysan ee Ramadaan, waxaana uu bulshada ugu baaqay inay dadka kale aan wax heysan ay caawiyan.
Isaga oo sii hadlayay Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed waxaa uu sheegay in dalka uu wajahayo xaaladi culus sida amni darro iyo cudurka COVID-19, waxana Bulshada ku nool degaannada Koonfur Galbeed uu ugu baaqay inay feejignaan muujiyaa, kana digtoonadaana weerarada ay geystaan Al-Shabaab.
Degaannada Maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weeraro ay geystaan Ururka Al-Shabaab iyo howlgallo ay siwadajir ah u fuliyaan Ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta koonfur Galbeed.
Previous articleSomaliland oo xukun Xabsi ah ku riday Sarkaal Xiriir la sameeyay dowladda federaalka Soomaaliya.
Next articleDunida Muslimka oo maanta laga sooman yahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadan kadib markii xalay laga arkay dalal badan bisha Soonka.
Intaan hadii uu diiday Farmaajo wuxuu rabo ha sameeyo ama baarlamaan muddo iigu dara ha yiraahdo ama ha dagaalamo waxaan arki doonaa halkii ay...
Suudaan oo Itoobiya ku wareejisay 60 maxbuus oo lagu...
CABDINUUR: Waxaan talo odaytinimo ku soo jeedinayaa in Nuune & Hayaan...